Ka shaqee Viljaskolan - waa dugsi hoose oo cusub oo ku yaal Angered laga bilaabo Agoosto 2021
Miyaad jeceshahay in dhammaan carruurta ay xaq u leeyihiin dugsiga ugu fiican?
Ogast 2021, waxaan ka bilaabi doonnaa Viljaskolan magaalada Angered. Waxaan diirada saareynaa wadashaqeynta ardayda qoysaskooda iyo bulshada deegaanka ee agagaarka dugsiga si loo abuuro xaaladaha ugu wanaagsan ee ardayda oo dhan si loo gaaro himilooyinka.
Waxaan raadineynaa shaqaale ku meel gaar ah
Ma tahay macalin mise arday? Bedel saacadle ah oo anaga ah, waxaad ku lug leedahay abuurista shuruudaha dhammaan ardayda si ay wax u bartaan, u horumariyaan oo ay ugu raaxaystaan ​​inta lagu jiro maalinta ay dugsiga joogaan. Shaqadaada beddelka saacadlaha ah, waxaad bedeli kartaa shaqaalaha caadiga ah haddii ay dhacdo maqnaansho, qorsheynta wakhtiga iyo horumarinta kartida. Haddii aad xiisaynayso inaad nala shaqeyso, noogu soo dir emailka ciwaanka info@viljaskolan.se
Jagooyinka la heli karo
Halkaan waxaad fursad u leedahay inaad iska diiwaangeliso xiisahaaga adigoo samaynaya waxa loogu yeero "codsi iskiis ah".
Ka dib markii la diiwaangeliyo arjigaaga iskiis ah, waxay ku egtahay bangigeenna codsadaha, oo aan adeegsanno markaan raadineyno musharrixiinta jagooyinka bannaan.
Codsi iskaa ah